Nhau - Unoda Matayi echando echando here?
Nzira yakavimbika yekuzvipinza mudambudziko ndeyekutyaira mumamiriro ekunze echando mumotokari isina kukodzera kutsvedza.Yekutanga kugadzirisa kwakaringana mota uye sarudza kana kuisa seti yechando matai pamota yako, rori kana SUV.
Matai echando—kana kuti chaizvoizvo, “matai emunguva yechando”—ane mishonga yerabha chaiyo uye magadzirirwo anoaita kuti arambe akabatirira mumamiriro okunze umo matai akajairika asingashande zvakanaka.Kana iwe uchigara munzvimbo ine sinou, ice kana kutonhora kutonhora, matai echando anogona kukupa mabhenefiti ekuchengetedza ayo mavhiri emwaka wese asingagoni kupa.
“Matayi echando” ishoko reindasitiri rinowanzoshandiswa panzvimbo pe“matayi echando” nokuti kugadzirwa kwetai kutsva kunonatsiridza mamhanyiro, mabhureki, uye mano emotokari, kunyange mumamiriro okunze anotonhora uye akaoma.
Basa rematayi echando nderekuwedzera huwandu hwemamiriro ezvinhu umo matai anochengetedza kubata uye anopa kukwevera kana matai akajairwa achitsvedza.Inogona kuva inodhura kutenga, saka vatengi vachada kuona kana vachida kuitenga uye nguva yekuiisa mumotokari yavo.
Robert Saul, mutungamiriri weNorth America consumer product strategy paBridgestone, akati: “Kana uchigara munzvimbo ine tembiricha inoramba iri pasi pe40 degrees Celsius kana kuderera kwenguva yakareba, ndinofunga kuti unofanira kufunga nezvekushandisa matayi echando.”
Sauro akawedzera kuti kana uchiwanzoenda kumakomo kundotora rutivi mumitambo yenguva yechando, zvinokuvaraidza zvingapesvedzerawo chisarudzo chako.
Miedzo yakaitwa neTransport Canada uye Canadian Rubber Association yakaratidza kuti matai emwaka wose anotsauka kubva pamuedzo wekuedza nekumhanya kwe40 kusvika ku50 km / h;izvi hazvizoitike kumotokari dzine matai echando.
Ongororo yakaitwa nehurumende yeQuebec yakagumisa kuti kuisa matayi emuchando akakodzera pamotokari yako kunogona kuwedzera kushanda kwemabhureki kusvika pa25% uye kudzivirira kudhumhana ne38% zvichienzaniswa nemwaka wese.
Vagadziri vemotokari mitsva vanokurudzira zvakakwana matai echando, kuti vawane kuchengetedzwa kwakanakisisa uye kushanda munguva yechando.